Saraakiisha Ciidamada qabsaday Kastamka Garoowe(Sawiro) – Xeernews24
Saraakiisha Ciidamada qabsaday Kastamka Garoowe(Sawiro)
Ciidan ka cadhooday hadalka ka soo yeedhay Wasiirka Maaliyadda Puntland, C/laahi Sheekh Axmed, ee ahaa inaanu jirin wax mushaaraad ah oo ka maqan Ciidamada Daraawiishta, ayaa qabsaday kastamka Wasaaradda Maaliyadda ku leedahay kontoroolka koonfureed ee Magaalada Garoowe.
Taliye Ku Xigeenka Ciidanka Daraawiishta Puntland, General Dayr Xaaji Cabdi, ayaa si cadho leh kaga jawaabay hadalka Wasiirka Maaliyadda, waxaana uu ku tilmaamay mid xaqiiqda ka fog.
Taliye Ku Xigeenka, ayaa qeexay in Ciidamada Nugaal, Sool iyo Cayn uu ka maqan yahay mushaarka muddo 30 bilood ah. Xilli sida uu sheegay ay mudadaasi ku samrayeen danta dadka iyo dalka, ayuu waxa xilligan dareenkoodu kiciyay uu ku sheegay hadalka ka soo yeedhay Wasiirka.
Afhayeenka Ciidanka Daraawiishta Puntland, Maxamuud Axmed Gubadle, ayaa sheegay in iyagoo dalka iyo dadkaba u tudhaaya ay doonayan in mushaaraadkoodu la siiyo, haddii la siin waayana, aanay cidina xuquuqdooda haysan karin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/Daraawiishta5.jpg 370 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-09 22:18:312017-03-09 22:18:31Saraakiisha Ciidamada qabsaday Kastamka Garoowe(Sawiro)
FALASTIIN VS SITTI DHIILLO JOOGTA AH OON CIDI U DHAG DHIGAYN
Dawladda Itoobia oo ku faantay in dishay madaxdi Tigreega ugu tunka wayna.
Heshiis caato ah oo aan la soo Hadal qaadin wixii sababay Xurgufta R/wasaaraha oo ganacsatada kala hadlay caawinaad deg deg ah oo la gaadhsiiyo...